BAOLINA KITRA – «POULE DES AS» :: Hiaro ny toerany any Mahajanga ny Fosa Juniors • AoRaha
BAOLINA KITRA – «POULE DES AS» Hiaro ny toerany any Mahajanga ny Fosa Juniors
Taorian’ny lalao nihaonan’ny Barean’i Madagasikara sy Lion de la Teranga avy any Sénégal dia hiverina amin’ny fifaninanana ato anatiny indray ny tontolon’ny baolina kitra malagasy. Hotontosaina any Mahajanga sy Antsirabe, amin’ny alahady ho avy izao, ny andro fahadimy amin’ny dingan’ny famaranan’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara na ny “Poule des AS” eo amin’ny “THB Champions league”.
Hatreto aloha dia mbola ny Fosa Juniors, avy any Boeny, no mitarika vonjimaika amin’ny alalan’ny isa folo. Manaraka azy ny Cnaps Sport Itasy ( isa fito), FC Vakinankaratra (isa telo) ary Elgeco Plus Analamanga isa iray).
Hanamarika ity andro fahadimy ity ny fifaninanana mifanalavitra atrehan’ny Cnaps Sport sy ny Fosa Juniors. Hanafika any amin’ny kianja Vélodrome Antsirabe, hihaona amin’ny FC Vakinankaratra, ny tompondakan’i Madagasikara farany. Hampiantrano ny ekipan’ny Elgeco Plus, ao amin’ny kianja Rabemananjara, Mahajanga kosa ny Fosa Juniors, tompon’ny amboaran’i Madagasikara farany. Manana tombony eo amin’ity lalao ity ary mety efa hahafantarana izay hisalotra ny anaram-boninahitra ny Fosa Juniors amin’ny maha ekipa mpampiantrano azy ireo. Mbola tsy resy tao amin’ny kianja Rabemananjara, rahateo izy ireo.
Baolina kitra- Federasiona Andrasana ny famoahana ny lisitr’ireo kandidà hofidiana filohan’ny FMF
FIFANOSEHANA TENY MAHAMASINA :: Niaiky ny fahadisoany ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra